जनमतहरू – Page2– इन्सेक
नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ । जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नुहुँदैन । जातीय समानताका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले चाँहि जातीय समानताका लागि के काम गरिरहेका छन् त ? बैतडी र डडेल्धुराका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई हामीले जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि तपाइँको स्थानीय तहले कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ भनेर सोधेका थियौँ ।
अध्यक्ष, शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी
वषौँदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको उत्थान आजको आवश्यकता हो । दलित समुदायलाई गैरदलित समुदायमा सम्मानित रूपमा बस्ने वातावरण हुन पनि आवश्यक छ । शिवनाथ गाउँपालिकाले विगत वर्षदेखि जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि विभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुख्य गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरूले विभेदको सामना गर्नु पर्ने बाध्यता भएकाले गाउँपालिकाले उनिहरूको आर्थिक अवस्था सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगत आर्थिक वर्षहरूजस्तै चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि शिवनाथ गाउँपालिकाले दलित समुदायलाई लक्षित गरी १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाहरूले पनि प्रति वडा १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् । गाउँपालिकामा जातीय विभेद निर्मुल पार्न विभिन्न किसमका सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू पनि गरिएका छन् । विभिन्न निर्माणका काममा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई अगुवा बनाएर काम पनि भइरहेका छन् । उपभोक्ता समिति गठनलागायत अन्य काममा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको अनिवार्य सहभागिता गरिएको छ । मुख्य कुरा के भने स्थानीय तहमा दलित–गैर दलित सबै समान हुन् भन्ने उदाहरण स्वरूप गाउँपालिकामा एक जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई कार्यालय सहयोगीको रूपमा भर्ना गरिएको छ । पालिकामा भर्ना गरिएका दलित समुदायका व्यक्तिले पकाएको खाना, नास्ता पानीलगायत अन्य खानेकुराहरू सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाने गरेका छौँ । यसैबाट जातीय विभेद अन्त्यको पहल थालेका हौँ ।
अध्यक्ष, डिलाशैनी गाउँपालिका, बैतडी
जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि समाजमा भएका दलित र गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सँगै राखेर कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ । एकातर्फी सचेतनाले पनि हामीले खोजेको जस्तो निर्मुलिकरण नहुन सक्छ । डिलाशैनी गाउँपालिकाले जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि विगतदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विगत वर्षहरूमा पनि गरिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पनि दलित समुदायको हौसला वृद्धि गर्नका लागि न्यानो लुगा वितरण गरिएको थियो । हामीले विकासका सबै काममा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता अनिवार्य गरेका छौँ । विगतको तुलनामा जातीय विभेद कम पनि भएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजना गरेको छ । यस वर्ष विषेश गरी जातीय भेदभाव नगर्ने र दलित–गैरदलित समान हुन भनी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने तथा व्यवहारमा पनि सो कुरा लागु गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सार्वजनिक रूपमा गरिएको कुनै कार्यक्रममा हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने छौँ । पालिकाभित्र जातीय विभेदका घटना हुन नदिन पनि काम गर्नेछौँ । सबै व्यक्ति समान हुन् भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्दै दलित–गैरदलित दुवै समुदायका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना छ ।
अध्यक्ष, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडी
जातीय विभेद मुख्य गरी गरीबी, शिक्षा र सचेतनासँग जोडिएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरू शिक्षा, सचेतना र बेरोजगारीको समस्याले उत्पीडनमा परेका हुन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएकै वर्ष पहिलो गाउँसभाबाट छुवाछुतरहित गाउँपालिका घोषणका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ । उक्त प्रस्तावले धेरै हदसम्म जातीय विभेद नगर्न प्रेरित गरेको छ । यद्यपी पुर्ण रूपमा जातीय विभेद उन्मुलन भइसकेको अवस्था छैन । हामीले प्रत्येक विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा सचेतनामुलक पम्प्लेटलगायत सामग्री राखेका छौँ भने विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँहरूमा जातीय भेदभाव गर्नु हुदैन भन्ने बारेका सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । गएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ । यस आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हामीले स्थानीय तह र प्रत्येक वडामा दलित नेटवर्क गठन गर्न लगाएर नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । दलित नेटवर्ककै आग्रहमा दलित समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि आग्रह गर्ने हाम्रो योजना छ । हामी चाहान्छौँ हामीले पहिलो वर्ष नै परिकल्पना गरेको छुवाछुत मुक्त पञ्चेश्वर साँचिक्कै होस । यदि कसैले जातीय विभेद गरे त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र कानुन अनुसारका अन्य कारवाही गरिने छ । विषेश गरी हामीले दलित समुदायका पाँच जना विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाबाट छात्रबृत्ति प्रदान गरी बाहिर पढ्नका लागि पठाएका छौँ ।
विशेश्वर प्रसाद ओझा
मेयर,अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा
दलित समुदाय राज्यको समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तवरले सबैखाले अवस्था, व्यवस्था र पहुँचबाट वञ्चित समुदाय हुन् । सांस्कृतिक हिसाबले समेत हेपिएका, दबाइएका वास्तविक श्रमजीवि वर्ग पनि यिनै समुदाय हुन् । दलित भित्रै पनि विभेद र छुवाछुत प्रथा छ । दलित जातीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध तथा गैरदलित जातीहरूसँगको वैवाहिकलगायतको सम्बन्धको कुरा त निकै परको विषय हो । यी यस्ता समस्याहरू सामाधानका लागि हामिले समाजमा रहेका बुढापाका, धामीझाँक्री तथा समाजका अगुवाहरूलाई सहभागी गराई विभिन्न किसमका जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिरहेका छौँ । पहिलेको भन्दा अहिले जातीय विभेदका घटनाहरूमा केही हदसम्म कमी त आएको छ । यसलाई सधैँका लागि निर्मुल गर्नका लागि हामीले नगरभित्र सञ्चालन भइरहेका विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । ग्रामीण भेगहरूमा जातीय विभेदका घटनाहरू बढी हुने भएकाले अहिले नगरपालिकाले प्रत्येक टोलटोलमा जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छ ।
अध्यक्ष, नवदुर्गा गाउँपालिका, डडेल्धुरा
जातीय विभेदका घटना गैर दलित समुदाय भन्दा पनि दलित समुदायमा बढिरहेको छ । गैर दलित र दलित समुदायहरूमा अहिले धेरै नै परिवर्तन आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अहिले पनि अदृश्य रूपमा छुवाछुत भइरहेको छ । गैरदलित समुदाय र दलित समुदाय भन्दा पनि दलित समुदाय भित्र नै विभेदको अवस्था छ । एक दलित अर्को दलित जातिको अस्तित्व नस्विकार्ने कुसंस्कार र संस्कृति छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना फैलाउनु नै उचित जस्तो लाग्छ । हामीले पनि पालिकाका प्रत्येक टोल टोल तथा विद्यालयहरूमा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेका छौँ । यसका साथै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र आमा समूहहरूबाट पनि विभेद अन्त्यका लागि चेतनामुलक सन्देशका लागि सबै क्षेत्रमा खटाएका छौँ । यसबाट थौरै भएपनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आएको छ ।
अध्यक्ष, अजयमेरू गाउँपालिका, डडेल्धुरा
परम्परागत मुल्य, मान्यता र संस्कारमा देखिएको अन्धविश्वास, विकृति, कुरिति, गलत धारणा र विश्वासका कारणले अझैपनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय विभेद कायमै रहेको छ । सामाजमा विद्यमान रूपमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि पालिका भित्र रहेका दलित समुदायको शैक्षिक जागरण र आर्थिक, व्यवसायिक एवम् रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न किसमका सिपमुलक तालिमहरूको आयोजना गरेका छौँ । विद्यालयमा अध्ययनरत दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहबाटै शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ । यसका साथै हामिले विभिन्न स्थानहरूमा दलित समुदाय र गैर दलित समुदयका व्यक्तिहरूबीच अन्तक्रिया कार्यक्रमहरूको आयेजना गरेका छौँ । यसबाट पनि केही हदसम्म जातीय विभेद न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको छ ।
प्रस्तुतीः नरी बडु/भुपेन्द्र विष्ट
चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !
गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका
सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुनौती अझ धेरै थिए । हामीसँग कानुनी सल्लाहकार थिएनन् । मेलमिलाप कर्ता बुटवलका सबै जसो वडामा पर्याप्त मात्रामा थिएनन् । जनप्रतिनिधिहरूले आएका विवाद हेर्देनौँ भन्न पनि नमिल्ने । आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत समाजमा हुने सबै खाले विवाद उपप्रमुखले हेर्ने हो भन्ने मानसिकता थियो । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले निश्चित क्षेत्राधिकार मात्र दिएको अवस्थामा देवानी बाहेक फौजदारी मुद्दाहरू आउने गरेका थिए । अहिले केही परिवर्तन भएको छ । बुटवलमा ९० जना मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन् । स्नातक तह उतीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ताहरू तयार भएका छन् । नेपालमै पहिलो पटक स्नातक तह तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता सर्वोच्च अदालतबाट आएको माननीय न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको टोली समेतले इजलासको अनुगमन गरिसकेको छ । इजलास कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पनि न्याय सम्पादनको अवस्थाको अनुगमन गरेर उजुरीहरू समयमै फस्र्योट हुने गरेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू नआएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।
अमृता गुरूङ, उपाध्यक्ष, सियारी गाउँपालिका
सुरू सुरूको ३–४ महिना निकै अप्ठयारो पर्‍यो के गर्ने होला ? कसरी गर्ने होला ? भन्ने लाग्यो एउटा संस्थाले तालिम दिएपछि केही सहज भयो । पहिला कानुनी प्रावधानका विषयमा बुझेको थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि त्यत्ति स्पष्ट थिएन । चुनाव त जितियो काम के गर्ने हो ? भन्ने अलमल थियो । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा कतै कानुन बाझिने हो कि भन्ने डर थियो । स्थानीय सरकार तेस्रो दर्जाको सरकार भएकोले नीतिगत रूपमा स्थानीय कानुनमा मात्र केन्द्रित हुनु परेको छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन भए सजिलो हुन्थ्यो । के गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको दुविधा थियो । मनमा एकदमै के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने खालको परिस्थिति थियो । जसले गर्दा फराकिलो रूपमा काम गर्न सकिएन । अर्को कुरा महिलाहरूले जति महत्वपूर्ण सवाल उठाए पनि वास्ता नगर्ने र त्यही कुरालाई पुरूषले उठान गर्दा त्यसको प्रभावकारिता छ भन्ने सोच्ने जुन हाम्रो महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र चिन्तन छ त्यो पूर्वाग्राही छ । त्यसलाई नतोड्दासम्म र महिलाले पनि नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने विश्वासको वातावरण श्रृजना नगर्दासम्म महिलालाई हेर्ने दुष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकिँदैन । आफ्नो अधिकारको अवस्था नबुझ्दासम्म यस्तै रहिरहने भएकोले अधिकार प्राप्तिका लागि अध्ययन बढाउने, सिकाईलाई तिखार्ने र संविधानले दिएको अधिकार र अवसरका रूपमा अगाडि बढाउन र उपाध्यक्षलाई दिएका काम कर्तव्य र अधिकारलाई मेरै टेवलबाट सम्पन्न गर्नका लागि म सक्छु त्यसका लागि निरन्तर लागिरहने छु ।
प्रमिला बिक, उपाध्यक्ष, मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही
पहिला धेरै समस्या थियो । त्यो समस्या धेरै समयसम्म हामीले व्यहोर्नु पर्‍यो । सायद अझ मधेशी समुदायमा अझ बढी समस्या भयो । अहिले केही सहज भएको छ । जति कुरा गरे पनि सानो उमेरमा पढ्न पाइएन । अहिले अवसर त पाइयो । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने चिन्ता भने फेरि पनि हामीलाई भइरह्यो । अहिले काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा बुझ्न थालियो जसले केही सहज बनायो । अहिले पहिला भन्दा फरक छ । अझ मधेशी समुदायमा त महिलाले चुलोचौको र घरको काम बाहेक केही गर्छन भन्ने छैन । त्यसमा अहिले केही चेतना आएको छ । पढाई नभएको र कानुनी विषयहरूमा कम जानकार हुँदा समस्या छ । महिलाले काम गर्न सक्छन भन्ने बुझाई पनि छैन । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । महिलाले पनि अवसर पाए केही गर्न सक्छन् भन्ने बुझाई कम छ । अधिकांश उपाध्यक्षले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन् । त्यो हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन ।
बिना राना, उपाध्यक्ष, सैनामैना नगरपालिका
सुरू सुरूमा धेरै समस्या भयो । के गर्ने ? कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? थाहा थिएन । छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरेर कसरी विश्वास बढाउने भन्ने थियो । कानुनी ज्ञान थिएन । मेरो काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार के कति छ त्यसको विषयमा पनि खासै ज्ञान थिएन । न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत भन्थे । कसरी मुद्दा मिलाउने हो भन्ने हुन्थ्यो । यतिसम्म कि अधिकृत स्तरको कर्मचारी नहुँदा कागजी प्रकृयामा कतै चुकिने हो की भन्ने मनमा डर हुन्थ्यो । निवेदन परेपछि विपक्षीलाई बोलाउँदा नआइदिने जस्ता समस्या हुन्थ्यो । पछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्दै, विभिन्न तालिम गोष्ठीहरूमा भाग लिँदै जाँदा केही सहज भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको छ न्यायिक समिति । अहिले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले कामकारवाही गरिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा १ बमोजिम सैनामैना नगरसभाले न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । अहिले पनि कानुनी विषय भएकोले जटिलताहरू छन त्यसमा हामीहरू कसरी मेलमिलापको माध्यमबाट जितजितको अवस्था बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परिरहेका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको चाप बढदो छ । त्यसलाई चुनौती नभनेर अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ ।
उमा काफ्ले, उपप्रमुख, सिद्धार्थनगर नगरपालिका
सरकारले न्यायिक समितिको सोच त ल्यायो । जुन सोचले ल्यायो सो अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेन । दुई वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहमा परिणत भएको कार्यपालिका, विद्यायन सभा र न्यायिक समिति भए पनि न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकारको अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था आजसम्म पनि छ । न्यायिक समितिको संयोजकमा अधिकांश महिला छन् । महिलाको नेतृत्वलाई अझसम्म पनि स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । यो हाम्रा लागि चुनौती छ । त्यत्ति मात्र होइन योजना बनाउँदा र बजेटको विनियोजनमा पनि पितृसत्तात्मक मुल्य मान्यता र सोच हावी हुन्छ । बजेट, योग्य जनशक्ति र सचिवालय गठन गर्न नसकेको स्थिति अहिलेसम्म छ । यसले न्याय सम्पादनमा एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । यति हुँदाहुदै पनि न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवादलाई मेलमिलापको प्रकृयाबाट निरूपण गर्न सकिएको छ । यो हाम्रो सफलता हो । यो दुई वर्षसम्मको अवधिमा के कति काम गर्न सकियो यसको प्रगति प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौँ । तपाईहरूले यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारले न्यायिक समितिको अवधारणा त ल्यायो तर त्यसको परिचालनलाई चुस्त दुरूस्त बनाउनका लागि चाहिने साधन र श्रोतको व्यवस्था गर्न सकेन जसले गर्दा चाहेजति न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्योरो भएको छ ।
प्रस्तुतीः रीमा बि.सी.
छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”–उहाँले थप्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा खाशगरी सडक भत्किएको अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले प्रत्येक बुधबार उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गर्छ । अहिलेसम्म ८० भन्दा बढी विवादित विषयहरूको निरूपण भएका छन् ।
स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरू चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक खड्गीका अनुसार पार्टीगत रूपमा हेरेर यो मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भएर आएका छैनन् । न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन ।
स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको छ ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम गर्दाको उस्तै उस्तै अनुभव देखिन्छ । पुलतीबजार नगरपालिका स्याङ्जाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक महेश पुरीका अनुसार बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गरिन्छ । विवाह, अंशवडा, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट, जग्गा खिचलो, बाटो, कुलो आदि जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।
“न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो, निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी फैसला गर्छौँ” अहिलेसम्म १६ वटा विवादित विषयमा दर्ता भई फैसला भएको र स–साना मेलमिलापका घटनाहरू प्रायः धेरै हुने उहाँको अनुभव छ ।
नगरपालिकाको जस्तै गाउँपालिकामा पनि मुद्दाका प्रकृति उस्तै छन् । तर गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी अभावका कारण सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ भएको दोलखा जिल्ला कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक कालिका पाठकले बताउनु हुन्छ । “मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादनसम्बन्धी सरकारले तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ” उहाँले सरकारले न्याय सम्पादनसम्बन्धी अभ्यासका लागि सरकारले तालिम दिए न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, संवैधानिक विवादका लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।
ठूलो अदालतहरूमा जाँदा मुद्दाको चाप बढी हुने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ । र छिटो न्याय पाउने सम्भवाना पनि कम हुन्छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । जुन राजनीतिक दलबाटै आएका जनप्रतिनिधि भएकाले बेलाबेलामा शंका उपशंका हुने समेत गरको छ ।
नेपालको संविधानले न्यायिक समितिले खासगरी देवानी प्रकृति विवादहरू स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । न्यायालयमा धाउनु पर्दा आम उपभोक्ताले धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या पनि यहीँ हल हुने देखिन्छ । जुन सकरात्मक कुरा हो । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा आम उपभोक्ताले सहज न्याय पाउन सक्छन् । स्थानीय तहका विवादित मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान होस भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार जुन उद्देश्यका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको हो, त्यो अनुरुप काम हुन सकेको छैन । “स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण होस्, सहज र छिटो न्याय होस् उद्देश्य हो तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सरकारले कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारीस्तरबाट तालिम दिने काम समेत गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार समेत दिएको छ । सो अनुरुप काम गरे न्याय निरूपण गर्न सहज हुन्छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गर्‍यो । जनप्रतिनिधिका लागि यो नौलो अभ्यास हो । यसअघि यस्ता अभ्यासहरू स–साना विवाद स्थानीय तहका मिलाउने भएता पनि कानुनी हैसियतमा न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा यो विशुद्ध नवीतम अभ्यास होस् । न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा मेलमिलापलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।
न्याय सम्पादन गर्दा अभ्यासरत विज्ञबाट तालिम लिएर न्याय निरूपण गर्न राम्रो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतक फैसलाहरू नै कार्यान्वयन नर्ग कठिनाइ हुने गरेको छ तर स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको हुने समेत बढी सम्भावना हुन्छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थ भएको हुँदा देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखहरू महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिलाई छ ।
व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७४ साल असोज ६ मा पारित ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुसार ‘देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी’ प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका विवादित विषय न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले आएका विवादित मुद्दाहरूमा उजुरी लिने र सुनुवाइपछि फैसला गर्ने त्यो गर्दा मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवाद समेत निरूपण गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार १३ किसिमका विवादित मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्न पाउँछ ।
ती मुद्दाहरूमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको,घरपालुला पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेका, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै अएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी–पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्न सक्ने स्थानीय शासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन ऐनअनुसार स्थानीय तहले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरिका विवादहरू समाधान गर्न सक्नेछन् । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाइ खाएको,सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोर–मैलाले छिमेकी असर पुर्‍याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति फरार भएमा देवानी र फौजदारी विवादमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषयमा पनि हो । झगडियाहरू चिनजानका र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि ‘विवेक’ प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन । दोषी व्यक्ति निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ । न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गर्न हुँदैन । वरिष्ठ अविधक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार न्यायिक समितिमा बसेपछि पार्टीगत कोट फुकालेर न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यसर्थ न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा विवेक पुर्‍याएर निष्पक्ष न्याय न्यायिक समितिले दिनुपर्छ । छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशामा स्थानीय नागरिकहरू छन् ।
कानुनको विद्यार्थी कालिका खड्काले प्राचीका लागि लेख्नुभएको समाचार विश्लेषण